Donald Trump oo digniin culus u direy dowlada Kuuriyada Waqooyi – Radio Jowhar
Donald Trump oo digniin culus u direy dowlada Kuuriyada Waqooyi
Comments Off on Donald Trump oo digniin culus u direy dowlada Kuuriyada Waqooyi 49 Views
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in Milatariga Maraykanka ay diyaar u yihiin inay la talaabo ka qaadaan dowlada Waqoyiga Kuuriya.
“Xal Milatari ayaan diyaariyay haddii aysan si wanaagsan u dhaqmin dowlada Waqoyiga Kuuriya,waxaan filayaa Kim Jong-un inuu raadin doonaa waddo kale.”ayuu bartiisa twitterka ku sheegay Trump.
Hanjabaadan ugu dambeysay ee ka soo baxday Madaxweyne Trump ayaa ku soo beegantay xilli xoghayihiisii arrimaha Gaashaandhigga Jim Mattis uu raadinayo xal kale oo uu ku doonayo in lagu qaboojiyo xiisada.
Mattis in xal Milatari uu yahay mid halistiisa leh balse dhinaca diblumaasiyada ay tahay mid habboon.
Xiisadan ugu dambeysay ayaa timid iyadoo dhowaan golaha ammaanku ay u codeeyeen cuna qabatayn hor leh, taasi oo lagu tilmaamay midii ugu adkayd ee mudo sano ah dal la saaro.
Jasiirada Guan ayaa hoy u ah laba saldhig oo cirka iyo badda ah oo ay leeyihiin ciidamada Maraykanka, waxaana lagu tirayaa xarrun istiraatiiji u ah is fidinta Maryakanka ee galbeedka badwaynta Pacific-ga.
Waxaa ku nool 160 kun oo qof iyo Lix kun oo askar Maraykan ah, waxayna ku taalaa gobol siyaasad ahaan cakiran. Shiinaha ayuu muran kala dhexeeyaa wadamada deriskiisa ah oo qaarkood ay xulifo la yihiin Maraykanka.
Dadka jasiirada Guan ayaa doonaya in ciidamada Maraykanka halkaas laga qaado, waxay u arkaan in ay keeni karaan deganaansho la’aan.
Inkasta oo aanay lahayn xuquuqda codaynta hadana dadka Guan waa muwaadiniin Maraykanka oo ku nool halka ugu fog ee badwaynta Pacific-ga.